I-townhouse yonke sinombuki zindwendwe onguIsabelle
ILa petite chaumontoise yindlu yedolophu emalunga ne-65m², yalungiswa ngokupheleleyo kwaye ixhotyiswe kakuhle kakhulu.
Ibekwe kwindawo yam kodwa inokufikelela ngokuthe ngqo esitratweni. Ke ngoko ndiya kuba ngummelwane wakho, ndikulungele ukukunika uncedo neengcebiso.
Ifumaneka kakhulu njengeveki, phakathi evekini okanye ifomyula yempelaveki. Unokwenza izicelo ezikhethekileyo kwaye ndingakwamkela ngovuyo ukuba ucwangciso lwam luyakuvumela.
Indlu ibekwe kumbindi wedolophu yaseChaumont en Vexin. Iivenkile zikumgama wokuhamba. Amashiti kunye neetawuli zibandakanyiwe kwixabiso kunye neemveliso ezisisiseko (ixesha, iimveliso zomatshini wokuhlamba, umatshini wokuhlamba izitya, iitawuli zeti ...).
Umrhumo wokucoca we-30 € uyongezelelweyo.
Ilungele abasebenzi, abathengisi, abadlali begalufa (ibala legalufa laseRebetz kwi-500m kunye neBertichères kwi-4kms) kunye nabahambi abanqwenela ukufumanisa iVexin.
PS: izitebhisi azikho kumgangatho wabantwana. Isithuba phakathi kwemivalo asingolawulo.
PS: Ukubanakho ukubeka izithuthuthu eyadini yam. Kwiimoto, indawo yokupaka isesitratweni
IChaumont en Vexin yidolophu encinci emnandi kakhulu enazo zonke iivenkile ezikufutshane. Uneendawo zokutyela kunye nepizzeria kwisiza (kunye nangaphezulu eGisors 7 km kude). Iikhosi zegalufa ezi-2 edolophini, eyaseRebetz (ekupheleni kwesitrato) kunye naleyo yaseBertichères. Isikhululo se-Chaumont en Vexin SNCF sikuvumela ukuba ufikelele eParis (65kms) malunga ne-1h15. Kumasango aseNormandy, ukufutshane ne-chateau sur motte de Gisors. Isixeko simi kumgama oziikhilomitha ezingama-30 ukusuka eBeauvais, kunye nesikhululo seenqwelomoya saso kunye ne-cathedral yayo enkulu. Uyakwazi ukubona iwotshi yeenkwenkwezi apho. Indawo esembindini, umalunga nemizuzu engama-40 ukusuka eGiverny, eAuvers sur Oise, eLes Andelys, eLa Roche Guyon, eVernon, eLyons la Forêt, ePontoise ....... ILe Vexin ikwabonelela ngeehambo ezintle.
Bricoleuse dans l'âme, j'ai entièrement restauré cette annexe indépendante qui se trouve sur ma propriété. J'aime le contact avec les gens et prendre soin de mes hôtes. Ancienne informaticienne, agent immobilier puis enseignante, je m'occupe dorénavant du gîte et je restaure de vieux meubles.
Bricoleuse dans l'âme, j'ai entièrement restauré cette annexe indépendante qui se trouve sur ma propriété. J'aime le contact avec les gens et prendre soin de mes hôtes. Ancienne in…
Ukuhlala kwindlu engummelwane, ndidla ngokubakho xa ndifika nabahambayo. Ngaphandle koko okanye kwimeko yokufika emva kwexesha, indlu inendlu yokuzimela ngokupheleleyo. Ndihlala ndifumaneka ngefowuni kwaye ndikulungele ukukunceda ukuba kuyimfuneko.
Ukuhlala kwindlu engummelwane, ndidla ngokubakho xa ndifika nabahambayo. Ngaphandle koko okanye kwimeko yokufika emva kwexesha, indlu inendlu yokuzimela ngokupheleleyo. Ndihlala nd…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Chaumont-en-Vexin